Sidee looga celinaa dadkii soomaaliyo joogay QURBO oo anaga waan ognahay in eey xuntehee?
SomaliNet Forum (Archive): Somali Women's Forum: Archive (Before Feb 2000): Sidee looga celinaa dadkii soomaaliyo joogay QURBO oo anaga waan ognahay in eey xuntehee?
<!-Post: 8717-!><!-Time: 0-!>
<!-Email-!><!-/Email-!><!-Name-!>Abdikariin<!-/Name-!> Unrecorded Date
Walaalayaal waan ognahay in eeyan qurbo fiicneeyn laakiin sidee ugu sheegeey kan kula dhashay oo raba in oow soo aado?.
Sababtoo ah diga walaalkaa ma larabtid waxi xun.
Asagina hadii aad tiraahdo meesha weeyxuntahay ma ku aaminaayo.
Marka dadkii soomaliyo joogay sidee looga celinaa yurub?.
<!-/Post: 8717-!> <!-Post: 8722-!><!-Time: 0-!>
<!-Email-!><!-/Email-!><!-Name-!>QURBONACE<!-/Name-!> Unrecorded Date
SAAXIIB NIN SAAXIBKAY AH OO DHAWAAN DHULKII AADAY WAXUU II SHEEGAY, IN XATAA KUWA MILION NERKA EE SOOMALIYA JOOGA AY RAADINAYAN BOOS AY LACAGTOODA KU BADASHAAN,
MARKAA ARINTANI XAL MA LEH BAY ILA TAHAY QOF YIMADA OO ARKA MOOYE,WHY? ADIGUBA WAAD TIMID MARKAD SOO SOCOTAY QOFNA KAMA RUMAYNAYN WAA XUN TAHAY<!-/Text-!>
<!-/Post: 8722-!> <!-Post: 8840-!><!-Time: 0-!>
Runtii Arimkaan laga dhawaajiyey waa arin aad murugo u leh.
Soomaaliya inlasoo cidleeyo waa barnaamij reer Galbeedku kutalo jiraan, hadana waad arkeysaan mareekan ninkii ladhihi jirey inuuu soomaali oo dhan kaxeynanayo.
Wiilal aan Qaraabo nahay oo sadex ah oo ilmo adeer ah oo Dhaqaatiir ahaa oo deganaa china oowax halkaas kubartey ayaa maalin dhaweyd Email iisoo direy waxayna iisheegeen in Ey Mareekanka aadayaan oo ey heleen Green Cardka, Waxay kaloo iisheegeen yarkaloo Philipiin joogey oo ardey ka ahaa oo jaamacda dhameeyey labo sanno kohor in UU ameerica uu Joogo oo uu kutegey Processka ey iaygu kutagayaan oo ah Some sort of lottery.
Calaa kuli xaal arinkaan waa Barnaamij degsan oo loogu tala galey in dadkaan lagu bara bixiyo.
Arinkaasna sheyga keliya oo looga hortegi karro waa in dadkeena arinkaas kubaraarugsan aan KADHOOFNO WADANKAAN OO AAN AADNO SOOMAALIYA AMA DHULALKA KALE EE ISLAAMKA. Qaar badan oo naga mid ahi Passportka wadaney joogaan ayey heystaan waxaana ufudud iney degaan Dhulalka Islaamka.
XALKU WAA INAAN ANAGA KANOQONO WADANKAAN GAALADA.
<!-/Post: 8840-!> <!-Post: 23551-!><!-Time: 0-!>
<!-Email-!><!-/Email-!><!-Name-!>Shumeey<!-/Name-!> Unrecorded Date
<!-Text-!> Waryaada markaad Biyo qaboow/Jalaato/Cayr ka dharagteen, ayaad rabtaan in masaakiinta aad Gaajada ku dishaan miyaa??? Ordaya idinka noqda nooh. Yaa Film kaas ugu sheekeenee oo kaa dhageesanaayo. <!-/Text-!>
<!-/Post: 23551-!> <!-Post: 25757-!><!-Time: 0-!>
<!-Text-!> salaamu caleeykum salaan kadib waxaan idin way diiyay qurbuhi madanbuu idiin yahay mise duli buu idiin yahay waxay aniga ilatahay in uuduli inooyahay sabab tuna waxay tahay war mafiiriseen xaga diinta sida yasan isuqabankarin warmafiiriseen sida uucaafimaadka ugudaran yahay warma fiiriseen sida dhaqsaha badan oo loogu duloobaayo war ma aragteen sida loo iloobaayo diintii iyo wax alaale wixii wanaagsanaaba war ma aragteen nin layimid 5 ciyaal ah dabadeedna kaligii kalugeeyay ciyaal kiina kii ugu dan beeyay laguursaday oo uu guur saday ninkale warbal cibccradaadaya bay baaaaaaay <!-/Text-!>
<!-/Post: 25757-!> <!-End-!>